Maydhayaasha muraayadaha: Talooyin ku saabsan doorashada LIFE PICKER - 2018
Maydhayaasha muraayadaha: Talooyin ku saabsan doorashada
Qalabka kuleylaha ayaa sii kordhinaya baahida macaamiisha. Waxay ku habboon yihiin qaliinka, ergonomic, qaadashada meel aad u yar. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa rinjiga. Waa sahlan tahay in la ilaaliyo noocyada noocan oo kale ah, waxay leeyihiin muuqaal muuqaal leh. Si aad u doorato alaabta saxda ah, waxaad u baahan tahay inaad raacdo talooyin dhowr ah.
waa in laga sameeyaa wax adag. Tani waxay ku siin doontaa awood xoog leh iyo iska caabin ah saameynta. Intaa waxa dheer, alaabtaasi waxay leeyihiin nolol hawlo dheer oo aan waxyeello lahayn. Xitaa haddii muraayaddu jabto, waxay burburinaysaa jajabyada, kuwaas oo soo koobi doona geesaha. Sidaa darteed, qofna lama gooyo iyaga.
Haddii cabirku uu ku jiro qalab, waa inaad hubisaa in si fiican loo dahaaray. Dhamaan oo dhan, haddii kale biyaha ayaa ka soo baxaya dhulka. Way fiicantahay haddii ay jiraan qashin khaas ah oo hooseysa sheyga, taas oo ah dareeraha qulqulaya.
Ka hor intaadan gadan, waa inaad si taxadar leh u eegtaa alaabta loogu talagalay jiritaanka chips, dildilaacyo ama cillado kale. Intaa waxaa dheer, haddii cabirku yahay mid midab leh, hubi inuu leeyahay hal dhinac oo dhinac ah.
Kormeer iyo tusaalee albaabada. Waa inay si fudud u furfuraan oo ay u dhawaadaan, laakiin taasi waa in la sameeyaa iyada oo aan lagu dadaalaynin qaybta qofka. Haddii alaabtu ay wax ka qabato, ka dibna hubi inay si ammaan ah u xireen. Waa lagama maarmaan in la sameeyo waxyaabo ka hortag ah. Kadibna waxay kugu habboontahay inaad furto albaabka xitaa gacmo qoyan.
Darbiyada dhismaha waa inay ahaadaan 3 ilaa 8 mm. Albaabada waxaa badanaa laga sameeyaa waxyaabo badan oo daba joog ah. Dhamaantood, waxay leeyihiin culeyska oo dhan. Dhumucdoodu way kala duwanaan kartaa 6 ilaa 8 mm.
Gudaha gudaha waxaa lagu dari karaa shey gaar ah ama filim. Tani waa lagama maarmaan si markaa dareeraha dareeraha uga soo baxo dusha sare sida ugu dhaqsaha badan. Tani waxay sababtaa, ma muuqan doonto dhibco nadiif ah, dhadhan ama lakab.
inta badan lagu rakibay geeska qolka. Sidaas darteed waxay ku nool yihiin inta ugu yar ee boos. Qaadku wuxuu ku dheggan yahay derbiga, kaas oo lagu daboolay foornada ama foornada.
Qaababka noocan oo kale ah waxay noqon karaan kuwo gebi ahaanba daahfuran, qaabeeya ama madow. Doorashada nooc gaar ah waxay ku xiran tahay doorbidkaaga iyo adeecitaanka gudaha. Derbiyada iyo albaabada alaabta waxa lagu dabaqi karaa qaabab kala duwan. Mararka qaarkood dhagxaan ayaa lagu abuuri karaa iyaga.
Dhismaha iyo dhamaystirka qalabka - Bixin degdeg ah oo laga helo Minsk
Caymiska nolosha ee ganacsadaha: sida loo dalbado bogga keydy ee 500?
Ka saarista laysarka: marxaladaha iyo qiimaha habraaca
Waa kuwee qalabyada loo isticmaalo marka la gelinayo biyaha biyaha ee guriga?
Qashin ka qaadista goobaha dhismaha